+30 Illusion illusion izay hahatonga anao hisalasala ny amin'izay rehetra hitanao | Famoronana an-tserasera
Ny atidohantsika dia voarindra ho mandika ny sary hitanao ary manaova fehiny mandray an-tanana ny fampahalalana izay ao anatiny amin'ny endrika fahatsiarovana sy zavatra niainana taloha. Raha raisintsika an-tsaina izany sy ny fiasan'ny ati-doha ary ny fijerena amin'ny toe-javatra sasany dia afaka mamorona eritreritra mahagaga isika. Drafitra tsy nampoizina izay manery ny ati-doha hameno amin'ny alàlan'ny fiheverana diso.
Avelako ianao hamarana ny andro Illusions optika 35 mahafinaritra:
Ireo efamira roa ireo dia miloko mitovy loko, na dia sarotra inoana aza. Apetraho eo amin'ny sisintany eo anelanelan'ny roa ny rantsan-tànanao dia hohamarininao izy ireo, na dia tsy miahiahy aza ianao dia azonao atao ny manamarina azy hatrany amin'ny eyedropper ao amin'ny Adobe Photoshop. Io ilay antsoina hoe illusion optique Cornsweet ary manararaotra ny fanakanana ny ati-doha, izay miteraka fahasamihafana bebe kokoa eo amin'ny zavatra roa rehefa samy manana ny sisiny miloko ihany koa.
Raha miampita ny masonao ianao dia ho hitanao fa eo anelanelan'ny faribolana no endrik'olona iray fanta-daza.
Raha mibanjina ny orona an'ity vehivavy ity ianao mandritra ny folo segondra ary avy eo dia miposaka haingana ianao raha mijery ny endrika mirehitra tsara dia ho hitanao miloko ny tarehin'ity vehivavy ity.
Ireo fiara telo ireo dia toa samy hafa habe avokoa saingy ...
Ny marina dia miatrika ny fiheveran-diso an'i Ponzo izahay. Izy io dia miasa satria ny atidohantsika dia mitsara ny haben'ny zavatra miankina amin'ny halavirana hita eo amin'izy ireo. Ny fiara fahatelo izay hitantsika amin'ny sary dia toa lavitra lavitra ny hafa ka toa manana habe lehibe kokoa.
Amin'ireto gif manaraka ireto dia ho hitanao ny fomba nanovan'ny teboka teboka tamin'ny fotoana nivoahany manodidina ny foibe fitambarana, fa raha mampifantoka ny masontsika amin'ny iray isika ary manaraka azy dia ho hitantsika fa tsy misy karazana fihodinana na fanovana loko .
Raha mijery ny hazofijaliana eo afovoan'ny sary mihetsika manaraka ianao mandritra ny segondra vitsy dia ho hitanao ny fanjavonan'ny teboka mavokely manodidina.
Eto amin'ity zaridaina ity dia ahitanao ahitra telo-habe amin'ny ahitra, sa tsy izany?
Raha ny marina, raha manova ny joro amin'ny masontsika isika, dia ho hitantsika izao manaraka izao:
Iza amin'ireo boribory volomboasary roa ireo no lehibe kokoa?
Eny tokoa, mitovy habe izy ireo.
Ity karazan-tsofina optika ity dia antsoina hoe Ebbinghaus ary manazava ny fahitantsika ny zavatra ary indrindra ny habeny. Rehefa voahodidin'ny zavatra lehibe kokoa ny zavatra iray dia toa kely noho ny tena izy izy ary ny mifamadika amin'izany.
Raha mijery ny teboka mavo eo afovoany ianao ary avy eo manakaiky kokoa ny efijery dia ho hitanao ny fihetsiky ny peratra mavokely.
Ny fiheverana Pinna-Brelstaff dia mitranga noho ny lesoka amin'ny fahitana peripheral.
Na dia sarotra aza ny mino azy, ny boaty A sy B dia mitovy loko:
Ny fampisehoana? Eto:
Ny atidohantsika dia manitsy azy ho azy amin'ny lokon'ny aloka manodidina. Satria i B dia ao anaty aloky ny varingarina maintso, saingy mbola mitovy loko amin'i A izy, mihevitra ny ati-doha fa maivana kokoa noho ny volondavenona.
Jereo mandritra ny segondra vitsy ity tadion-dranomaso ity ary jereo ny sary etsy ambany.
Rehefa mandinika ny tadion-dranomasina teo aloha ny masontsika dia miasa matetika ary farany reraky ny fahatongavan'ny sary mihetsika rehefa mihatsara ny masontsika.
Ny Ames Room dia manome antsika fomba fijery diso fa raha ny tena izy ny endrik'ilay efitrano dia trapezoidal fa tsy toradroa. Ny rindrina dia mitongilana miaraka amin'ny gorodona sy ny valindrihana.
Toa mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha hafa ireto sakana ireto?
Rehefa esorina ireo bara mainty amin'ny sary mihetsika, hitantsika fa mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mitovy izy ireo. Ny tsipika mifanila dia manodikodina ny fahatsapana ny fihetsiky ny atidohantsika.
Raha manakaiky tsimoramora ity sary ity ianao dia hiseho fa mihamazava hatrany ny jiro.
Izy io dia vokarin'ny luminance gradient mahery izay hitan'i Alan Stubbs.
Jereo akaiky ny afovoan'ny kinovan'ny loko an'ity sary ity, andraso ny hanovana azy amin'ny kinova mainty sy fotsy, ary ho hitanao ny sary miloko.
Ny atidohantsika dia mitazona mandritra ny fotoana fohy ny loko nanehoana azy, amin'ity tranga ity ny loko volomboasary sy manga.
Ny teboka rehetra miseho amin'ity sary ity dia fotsy, fa ny sasany mainty. Mbola tsy nohazavaina ny fanazavana momba an'io forona io.
Amin'ny alàlan'ny ravina misy tsipika mainty Brussup dia afaka mamorona sary mihetsika.
Ny mason'ireto dinôzôro manaraka ireto dia toa manaraka antsika rehefa mandroso amin'ny lalana halehantsika isika.
Tsotra ihany ny fanazavana, ny endrik'ireo saribakoly ireo dia poakaty ary manana endrika mivelatra na dia toa manana endrika convex mahazatra aza.
Akiyoshi Kitaoka dia mampiasa ny herin'ny famoronana misy singa geometrika, ary koa ny famirapiratana sy ny loko. Ny valiny dia mbola sary toa mihetsika.
Amin'ny fampiasana teknika mitovy amin'izany, Randolph dia afaka mamorona fanjanahana toy ireto manaraka ireto:
Amin'ny alàlan'ny vokatra avo roa heny dia azo atao ny manao sarin'olona avy amin'ny fomba fijery roa samy hafa amin'ny fomban'i Pablo Picasso.
Amin'ny lalana mankaiza no mihazakazaka ity metro ity? Topazo maso mandritra ny fotoana fohy dia hikapoka kely ianao, hanova ny lalana ny atidohanao.
Ahoana no ahodin'ireo mpandihy telo ireo?
Ny vehivavy afovoany dia mihodina amin'ny fotoana iray ihany amin'ireo eo amin'ny sisiny. Raha mijery ny hato-tanana eo ankavanana ianao dia ho hitanao ny fifindrany amin'ny lalana mifanohitra amin'ilay iray any amin'ny faritra havia. Raha mijery ilay eo afovoany ianao, dia ho hitanao fa miroso amin'ny lalana iray izy rehetra.
Ireo zavatra ireo dia toa tena misy sy telo-refy, na dia sary fisaka aza.
Mijere eo amin'ilay teboka maintso mandritra ny segondra vitsy dia mivapoka. Ho hitanao fa manjavona sy miseho ireo teboka mavo rehefa mipi-maso ianao
Tsy miala mihitsy ireo teboka mavo. Ny sary mbola haingana dia lavo tsy takatry ny saina, indrindra rehefa voahodidin'ny sary miova tsy tapaka.
Toa sarontava io, sa tsy izany?
Raha ny marina dia mpivady mifanoroka.
Hoeritreretinao aloha fa mahita vehivavy telo manintona ianao ...
Minoa na tsia, ny tilikambo roa an'ny Pisa dia mitovy tanteraka ary, na dia toa mirona kokoa aza ilay eo ankavanana, dia tsia.
Ireo tsipika marindrano dia miseho ho mitongilana, fa jereo lava kosa dia ho hitanao fa mifanitsy izy ireo.
Ireo boribory mifanindry ireo dia boribory lavorary ary tsy mifampikasoka
Mazava be ny rano ao amin'ny Farihy Flathead ka toa marivo. Azonao inoana ve fa 112 metatra ny halaliny?
Ity dia sary an-tsaina tsotra, fa tena mahay
Toa tsy misy gorodona ity efitrano fandoko 3D ity:
Raha manarona ny rindrin'ny lalantsara amin'ny tananao ianao dia ho hitanao ny fihenan'ny hafainganam-pandehan'ny mialoha. Raha manarona ny afovoany ianao dia hitombo ny hafainganam-pandeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » +30 Illusion illusion izay hahatonga anao hisalasala ny amin'izay hitanao rehetra
Samuel Falero dia hoy izy:
FANTASTIKA !! MISAOTRA ANAO !!
Valiny tamin'i Samuel Falero
Ilusiôna optika tena tsara, mampiala voly ahy izy ireo, hizara aho
Amin'ny maha fialamboly, tena tsara ary zavatra tsara indrindra hahafahana mahatakatra ny fomba famitahan'ny ati-doha antsika